February | 2011 | Aung Ko Htwe Personal Website
comming soon album စာလုံးပေါင်းပေး မထားဘူး Pink Rabbit Greenday Eye ************************************* question- answer-နိုင်ငံခြားwebsite တချုိ့ကတင်ထားတာများတော့ ကြည့်ရခက်ပါတယ်…..လေးတယ်… ကျွန်တော့်ကို website ကြည့်လေ့ရှိသူဆိုပြီး အကူအညီတောင်းတာပါ ကျွန်တော်လည်း အကူအညီတောင်း ပြီး proxy ကျော်ကြည့်ရတာပါပဲ လိုင်းနည်းနည်း ကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့ www.vtunnel.info နဲ့သုံးကြည့်ပါ….. ကျွန်တော့်website blog ကတော့ ပေါ့ပါတယ်..ဟားဟား
for comming year …. Chelsea Champion league or Europa league ?
လူများပြီးပွဲမစည်ဘူးနော် ကိုယ်အကြောင်းဆိုတာ –နားလည်ပေးနိုင်မယ့်လူပဲပြောချင်တာ သိပြီးသားတွေဆိုတော့–အကျဉ်းချုပ်ရေးကြည့်မိတယ် ရှေ့ပိုင်းကိစ္စတွေ–နည်းနည်းတွေ့ လာရတော့–၀တ္ထု လွဲမှာစိုးလို့
What my name ? Rhinna –Single Music Video Making *************************************************** Thank U **************************************************** အရင်တပတ်က သတင်းတစ်ပုဒ်ဖတ်ရတယ် ရီဟမ်းနားရဲ့ဗီဒီယိုမှာ —သူ့ဓာတ်ပုံရဲ့ အလင်းအအမှောင်– အယူအဆ–တုံး– နဲ့တူတယ်ဆိုပြီး–တရားစွဲမယ်လို့ပြောတယ် ထူးဆန်းပါပေ့နော် ဒါမျိုးဆိုတာ စွပ်စွဲလို့ရတာမဟုတ်—လို့ထင်တာပဲ ၂၀၀၇ လောက်ကဆို တိုက်ဆိုင်တယ်ပဲသဘောထားတာ ကိုယ်လိုဆိုရင်တော့-မုန့်တစ်ပွဲလောက်ပဲတောင်းမှာပါ—ဟားဟား account လေးတောင်မပေးဘူး—-ဟားဟား—- စေတနာပါပါလေးရိုက်ပေးရင်တော်ပြီပေါ့ များများဆိုရင်တော့ / လေးပူ လေးပူ–ပေါ့ အေးအောင်လုပ်ပေးပါ နစ်နာနေအုံးမယ်—- ဟား ဟား ************************************************်
new movie ဇတ်လမ်းကတော့ရောရက်ပေါ့ တွဲဘက်လား/ တီးဘက်လား
***************************** Need to take care wings + attack+ midfield need to balance attack and defense
Awards Dress Talk and Performance ….. ဖိတ်တော့ဖိတ်တယ် တီဗီ မှာ ဟား ဟား
Grammy award winner Best Metal performance Iron Maiden / El dorado 15/ 16
Champion league 16 1st leg….. Important ….. ************************** Copenhagen Vs Chelsea attack + midfield Marseille Vs Man u good match Inter Vs Bayern Munich New style match /wings ? Lyon Vs Real madrid Lyon away kick is good Real mid … Continue reading →